AndEX Pie 9.0, chirongwa chitsva chekuisa Android pane PC yako | Linux Vakapindwa muropa
Nema desktop anoshanda masisitimu isu tinogona kuita zvese uye ndiyo sarudzo yakanakisa yemakomputa, asi masisitimu aya anogona kuramba achivandudza zvishoma. Akazviita sei? Zvakanaka, pakati pezvimwe zvinhu, kuve unoenderana nema mobile application. Makambani akaita seMicrosoft neApple ave kutoshanda (kana kuwana) pairi, asi ko kana izvo zvatiri kuda iri mobile operating system paPC yedu? Kune izvo kune mapurojekiti senge Android-x86 kana UyeEX, chirongwa chidiki chakavakirwa pane yekutanga.
AndEX Pie 9.0 yave kuwanikwa uye inouya nemazhinji mafomu akaisirwa default, ese anozivikanwa, akadai seFirefox kana Clash of Clans. Uye tichitaura nezvekuiswa kwekushandisa tinofanirwa kutaura nezve dambudziko diki: Google Apps hazviwanikwe, chimwe chinhu chavari mu Android-x86. Iyo haina kana iyo Google Play Chitoro, asi iine chitoro chakaisirwa nekutadza Aptoide, chimwe chitoro uko maapplication ese ari mahara uye kwatinowana zvimwe izvo Google isingagamuchire muchitoro chayo chepamutemo.
AndEX Pie 9.0 inosanganisira Aptoide sechitoro cheapp
UyeEX Pie inogona kuiswa uye kuvhiyiwa pane chero komputa, chimwe chinhu chatingaitewo ne dualboot. Inogona zvakare kumhanya seRarama USB kana kuiswa padanda re USB. Dambudziko nderekuti kuiisa seyakaberekerwa, iwe unofanirwa kuita manyorerwo GRUB, chimwe chinhu icho, nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza, isu hatikurudzire kune vashoma-nyanzvi vashandisi. Iwe une zvinyorwa zvekuisa pano.
AndEX Pie 9.0 haina mahara. Inotengeswa pamadhora mapfumbamwe. Ini pachangu, ndamboedza iyo vhezheni iyo yakavakirwa, ndinokurudzira, ndisati ndazvitenga, ita shuwa kuti pane mukana wekudzoka. Ini ndinotaura pane izvi nekuti zvingangoita kuti mamwe mafomu haavhure uye kana aya ari iwo aunoda zvakanyanya, AndEX Pie yako haizokubatsire zvakanyanya. Pakati peavo vakanditadza pandakaisa Android-x86 isu tine Kodi uye Movistar +.
Kana iwe uchifarira kuzvitenga uye kuzviedza, usazeze kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » AndEX Pie 9.0, chirongwa chitsva chekuisa Android pane PC yako
Miguel M. akadaro
Kwete zvakaipa, imwe purojekiti nyowani inoedza kuita zvatinoda zvakanyanya: kugona kushandisa Android pakombuta yedu inoperekedza OS yedu yatinoda, nekuda kwe (ngatiisei seizvi) kushomeka kwekuda kuwana nhare mbozha (kwete tese tine US $ 450 yekuva vane simba kwazvo). Mune yangu chaiyo kesi, ini ndakaedza Android-x86, uye chete chinokanganisa chinobuda ndechekuti chinowanzo tenderedza mashandisiro ayo akatenderedzwa, uyezve iyo skrini haina kudzoka kune yakajairwa (kunyangwe ichichinja iyo yekumisikidza kuti ive yakatwasuka chete). MuPoenixOS inogumira kuti maapplication haatenderedze, uye unogona kunyange kuisa windows madiki. Ndichiri kufanira kuyedza PrimeOS, uye kana ikasangana nechimwe chezvinodiwa: kuti inotakura zvakanaka Anwendung ichi, iyo mune dzimwe dzandakaedza, iwo machira akaputswa, uye zvinongomhanya chaizvo mumaemulators / simulators eWindows.
Pindura Miguel M.
Iko kune iyo Assembly inotsigira hdmi odhiyo yeiyo x-86?
Pindura kuna Sergey
Maitiro ekujekesa browser browser kubva kumutsara wekuraira